मुख्य समाचार « Tuwachung.com
गाँस, बास, कपाससँगै शिक्षा अपरिहार्य मानिन्छ । शिक्षाले सम्बन्धित मानिसको जीवन सरल र सहज बनाउँछ । शिक्षित मानिसलाई सबैले सम्मान गर्छन् । उनै सम्मानित व्यक्तित्वको
यसकारण गाग्रो र अम्खोरा खाली राख्न हुँदैन
छोरा–बुहारीलाई घर–व्यवहार जिम्मा लगाएर किराती बूढाबूढी केही समयका लागि परदेश लाग्ने निधो गरे । ‘बेलुकीको खाना खाएपछि सुत्नुअघि सबै मालमाता सफा गरेर थन्काउनू,’ सासूले बुहारीलाई सुझाइन्, ‘गाग्रो र अम्खोरा कहिल्यै
जलजला गाउँपालिकाले गाई–भैंसीलाई पोषण भत्ता वितरण गर्न थालेको छ । गाउँपालिकालाई पशुपालनको माध्यमबाट दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको ब्याएका गाई–भैंसीलाई पोषण भत्ता दिने कार्यक्रम प्रभावकारी
वडासदस्यले मानेनन् सांसदको अनुरोध
हलेसी (खोटाङ) । सनाखतका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते आयोग कार्यालय बोलाएको छ । दल दर्ताको आधिकारिकता पाउन एक दिन बाँकी रहे पनि खोटाङमा
स्थानीय तहमा कानुनविपरीत खर्च
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा ‘गाँउगाउँमा सिंहदरबार’को नारा राम्रै गरी लागेको थियो । जनतालाई घर–आँगनमै सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ मत माग्न पुगेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले कतिपय स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा
फोहोर किन्ने उपमहानगरपालिका
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकाले नगरवासीसँग फोहोर खरिद गर्न थालेको छ । बोटल र गुट्खाका खोलमा पैसा आउन थालेपछि स्थानीय दंग परेका छन् । गल्ने फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन तयारी
सडकबाटै भुलभुले दूधकुण्ड देउधामको प्रवेशद्वार देखिन्छ । मध्य–पहाडी लोकमार्गको भुल्के (नेर्पा)मा रोकिएका पाइला सिँढी उक्लँदै जाँदा भुलभुले दूधकुण्ड देउधाम प्रवेशद्वार पुगिन्छ । त्यहाँबाट बायाँपट्टि सातवटा ढुंगेधाराबाट आइरहेको पानी हेरिरहूँजस्तो लाग्छ
किरातीका परम्परागत घर सुरक्षित राख्न हलेसीमा एकतले माङ्खिम
किरातीका परम्परागत घर कस्ता हुन्थे ? उनीहरू कस्ता घरमा बस्थे भन्ने इतिहास सुरक्षित गर्न मुन्दुममा वर्णन गरिएअनुसारको हलेसीमा पितृघर (माङ्खिम) बनाइने भएको छ । किरातीले निर्माण गर्ने घरसम्बन्धी मुन्दुममा वर्णन
कोरोना महामारीमा महिनावारी
कोरोना कहरले नेपाल र नेपाली अछुतो छैनन् । नेपालमा ‘लकडाउन’ गरिएको छैन । स्वास्थ्य संकटकालसमेत लागू गरिएको छैन । निश्चित समयमा बाहेक निषेधाज्ञामा सबै–सबै बन्द छन् । अत्यावश्यकबाहेक सरकारी कार्यालयले
बेड चाहिए ९८५१२५५८३७/९८५१२५५८३९ मा फोन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि शय्या चाहिएमा टोलफ्रि नम्बर ११३३ एवम् मोबाइल नम्बर ९८५१२५५८३७ र ९८५१२५५८३९ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना
हलेसी (खोटाङ) । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका नगरप्रमुख इवन राईले पत्रकार कमजोर भए मुलुक असफल बन्ने जिकिर गरेका छन् । तुवाचुङ साप्ताहिक दोस्रो वार्षिकोत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख
वन वातावरणले स्थानविशेषलाई हरियाली बनाउन सघाउँछ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ९० प्रतिशत वन सल्लाले ढाकेको छ । बाँकी १० प्रतिशत चौडापाते रूखबिरुवा छन् । सखुवा, चिलाउने, चिउरी, चाँपलगायत रूख चौडापातेअन्तर्गत
हलेसी (खोटाङ) । त्रियुगा नगरपालिका–६ जलजले उदयपुरनिवासी प्रभा राईले हलेसी महादेवको नाममा १ तोला ४ लालको सुनको सिक्री चढाएकी छन् । त्रिनपा–१४ साउनेमा रहेको साउने स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमी राईले पुस
बादलसँग तस्बिर खिच्ने हिटलरको रहर
समुद्री सतहदेखि दुई हजार १९५ मिटर उचाइमा रहेको हाँडीकोट । यहाँबाट नाङ्गो आँखाले दर्जनौं हिमशृङ्खला देख्न सकिन्छ । मुटु छुने चिसो ! लुगलुग कमाउने सिरेटो हाँडीकोटमा चलिरहन्छ । वर्षाको समयमा
नेकपा खोटाङ ओली समूहले संसद् विघटनको पक्षमा २०७७ पुस १२ गते मोटरसाइकल र्याली निकाल्यो । त्यसको दुई दिनपछि पुस १४ गते नेकपा खोटाङ प्रचण्ड–माधव समूहले संसद् विघटनको विरोधमा कार्यक्रम गर्यो
कहाँ पुगे होलान् फिकल ?
आफूसँगै अध्ययनरत साथीहरू विद्यालय जाँदै गर्दा फिकल परियार हलेसी पुग्न हतारिन्थे । त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आइपुगेका पर्यटकलाई हलेसीबारे जानकारी गराउँदै घुमाउनु परियारको काम थियो । पर्यटकले स्वेच्छाले दिएको रुपैयाँले उनको पढाइ
बनेपा पुगेर पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले भने– खेताला लगाएर विरोध गर्नु अर्थहीन
काभ्रेपलाञ्चोक । पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैका ठूला नेताले अर्का पार्टीका ‘खेताला’ खोजेर विरोधमा लगाउने काम थालेको आरोप लगाएका छन् । बनेपा नगरपालिका–३ मा रहेको नेकपा जिल्ला
हलेसी (खोटाङ) । हिजोआज समाजसेवा गर्ने मनकारी मानिस भेट्न त्यति सजिलो छैन । त्यसमा पनि समाजसेवा गर्ने युवा चामलमा बियाँ भेटेसरह पनि भेटिँदैनन् । तर, त्यस्ता दुर्लभ समाजसेवी भेट्दै नभेटिने
हलेसी (खोटाङ) । सांसद विशाल भट्टराईले हलेसीमा बन्न लागेको १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालले सेवा प्रवाह थालेपछि हलेसीवासीले भोगेका स्वास्थोपचारसम्बन्धी भयावह समस्या कम हुँदै जाने विश्वास गरेका छन् । हलेसी तुवाचुङ
७३ वर्षीयालाई घरमै नागरिकतासँगै पाँच महिनालाई खाद्यान्न
दमौली (तनहुँ) । देवघाट गाउँपालिका–३ तनहुँनिवासी ७३ वर्षीया माया गुरुङले ७३ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्य र देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गबहादुर